အဆိုပါ WINDOWS 10 ကို OUTPUT ကိုအကြောင်းကိုမေးဖြေ - WINDOWS ကို - 2019
အဆိုပါ Windows 10 ကို output ကိုအကြောင်းကိုမေးဖြေ
Windows 10 ကိုများလွှတ်ပေးရေး 8.1, Windows 10 ကို reserved နေကြသည်ကို Windows7နဲ့ Windows, OS ကိုရဲ့နောက်ဗားရှင်းအနေနဲ့အဆင့်မြှင့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် running, ကွန်ပျူတာများထက်နည်းသုံးရက်အတွင်းဆိုလိုတာကဇူလိုင်လ 29, များအတွက်စီစဉ်ထားသည်။
မကြာသေးမီကသတင်းအချိန်ဆက်စပ်မွမ်းမံမှုများ (တစ်ခါတစ်ရံကွဲလွဲ) ကြားထဲကအသုံးပြုသူများအတွက် Microsoft တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအဖြေရှိပါတယ်အချို့သောရာမှ, သို့သော်အချို့အတွက်မေးခွန်းအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် - မဟုတ်ပါဘူး။ ဤဆောင်းပါး၌ငါအရေးကြီးလှသည်ထင်ကြောင်း Windows 10 ကို ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Windows 10 ကိုအခမဲ့ Are
ဟုတ်ပါတယ်, Windows 8.1 ကိုလိုင်စင် (သို့မဟုတ် 8.1 သည် Windows 8 ကနေ upgrade) နှင့် Windows7နဲ့စနစ်များ, Window 10 upgrade များအတွက်ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်အခမဲ့ရလိမ့်မည်။ သငျသညျအနာဂတျတှငျစနစ်ကို update ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်ကာလအတွင်းကဆည်းပူးရန်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက။
"ဟုအဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက်တစ်နှစ်သင်လိုအပ်သည့် operating system ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ " အဖြစ်ဤအချက်အလက်အချို့သည်ရိပ်မိနေပါတယ် သငျသညျအခမဲ့ Windows 10 ကိုအဆင့်မြှင့်ပထမနှစ်တွင်အဘို့, ပြီးတော့သင့်ထံမှအဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ငွေပေးချေမှုလိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ, မတစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုပြီးနောက် (အနည်းဆုံး Home နဲ့ Pro ကို၏ OS ဗားရှင်းအတွက်) ပါလျှင်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ပါဘူး။
အဘယ်အရာကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်မှာ Windows 8.1 နှင့်7လိုင်စင်ဖွစျသှား
သငျသညျ upgrade သောအခါ, OS ကို၏ယခင်ဗားရှင်းသင့်ရဲ့လိုင်စင်သို့သော် Windows ကို 10 လိုင်စင်ဖို့ "အဖြစ်ပြောင်းလဲ" အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း, သင် system ကိုပြန်လှိမ့်နိုင်ပါတယ်: ဤအမှု၌သင်တို့ကိုအသစ်လိုင်စင်ရ 8.1 သို့မဟုတ်7ရ။
သို့သော်ရက်ပေါင်း 30 အပြီး, လိုင်စင်နောက်ဆုံးတော့ Windows 10 ကိုအတွက် "fixed" မည်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦး system ကိုပယ်ဖျက်ရန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြောင့်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောသော့ချက်နေဖြင့် activated မရနိုင်ပါ။
(Windows 10 ကိုအတွင်းကို Preview အတွက်) ပယ်ဖျက်ရန်အင်္ဂါရပ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ပြုလုပ်သေးကိုမသိရ - တစ်ပယ်ဖျက်ရန်ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည်အတိအကျဘယ်လောက်။ သင်စနစ်သစ်ကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလက်ခံလျှင်, ငါပထမဦးဆုံးကိုယ်တိုင် backup တစ်ခုဖန်တီးရန်အကြံပြု - သင်တဲ့စနစ် image ကို embedded operating system ကိုကိရိယာများ, Third-party software ကိုဖန်တီး, သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ်တစ်ဦး built-in ပြန်လည်နာလန်ထူ image ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်မကြာသေးခင်ကငါအဆင့်မြှင့်အကြောင်းကိုရေးသားဖို့သွားပြီးနောက်အထူးနောက်ကျောကို Windows 10 ကနေလှိမ့်ဖို့ created တစ်ဦးအခမဲ့ utility ကို EaseUS စနစ် GoBack တွေ့ဆုံခဲ့ပေမယ့်စာရင်းစစ်နေစဉ်အတွင်းကကောက် running, ငါသည်အဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်မတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါဇူလိုင်လ 29 updated ရလိမ့်မယ်
မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ၏ကြီးမားသောနံပါတ်နှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်လိုအပ်သည်မြင့်မားသော bandwidth ကိုကြောင့် updates များကိုအားလုံးစနစ်များအပေါ်တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါရတဲ့အချိန်အတွက်ကိုဆန့်ထားပြီးဖြစ်သောသဟဇာတစနစ်များ, အပေါ်အိုင်ကွန် "စာအုပ် Windows 10 ကို" ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်ဝသကဲ့သို့ သူတို့ထဲကလူအပေါင်းတို့အားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
အဘယ်ကြောင့်သင် update ကို back up လုပ်ထားဖို့လိုအပ်သလဲ - "Windows 10 ကို Get"
မကြာသေးမီကသဟဇာတကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အသစ်က OS ကိုကြိုတင်ယူထားရန်ခွင့်ပြုသည်သောအကြောင်းကြားစာကိုဧရိယာအိုင်ကွန် "Get က Windows 10" အတွက်ထင်ရှား။ , ထိုသို့ကဘာလဲ?
စနစ် backup လုပ်ထားပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်သမျှ - ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန် upgrade လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိစဉ်အခါနိုင်အောင်ထွက်ပေါက်ရှေ့တော်၌ထိုစနစ်က update လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေအချို့ Pre-loading ။
ပထမဦးဆုံးအလုံးကိုခြှတျယှငျးတညျ့ပါလိမ့်မည်မတိုင်မီတစ်လ - သို့သော်ကြိုတင်စာရင်း update လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်ထို့ပြင်အခမဲ့ Windows 10. ခံယူပိုင်ခွင့်ကိုထိခိုက်ပါဘူး, အတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထောက်ခံချက်ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်အပြီး updated နှင့်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲမစောင့်နေသည်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Windows 10 ကိုတစ်ဦးသည်စင်ကြယ်တပ်ဆင်လုပ်ဆောင်လုပ်နည်း
Microsoft ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကသတင်းအချက်အလက်အရ, အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်, သငျသညျတူညီသောကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Windows နှင့် 10 စင်ကြယ်တပ်ဆင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစက Windows 10 ကို install သို့မဟုတ် reinstall တစ် bootable USB drive ကနှင့် disk တွေဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့စစ်ကြောစီရင်တော်မူနိုင်ပါတယ်အဖြစ်တရားဝင်ဖြန့်ဝေပါစေရန်အခွင့်အလမ်းကိုစနစ်သို့ built ပါလိမ့်မည်သော်လည်းကောင်း, သို့မဟုတ် Windows Installation လုပ်တဲ့မီဒီယာဖန်ဆင်းခြင်း Tool ကိုနဲ့တူမျှအပိုဆောင်း software နှင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦး 32-bit နဲ့ system များကိုအသုံးပြုလျှင်ထို့အပြင်အဆိုပါ update ကိုလည်း 32-bit နဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးအပြီးသင်တူညီတဲ့လိုင်စင်နှင့်အတူ Windows ကို 10 နဲ့ x64 install လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Windows 10 ကိုအားလုံးကိုအစီအစဉ်များနှင့်ဂိမ်းများကို run ပါလိမ့်မယ်
သင့်ရဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ installed အစီအစဉ်များကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးနောက်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သဟဇာတမ၏အမှု၌, သင်နောကျဆကျတှဲ၌ဤအကြောင်းကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်အားလုံးသည် "ကို Windows Get ယေဘုယျအားဖြင့်, Window 8.1 အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့အရာအားလုံးကိုကိုယ့်ကို run ပါလိမ့်မယ်နဲ့ Windows 10 မှာပြေး 10 "( ပတ်သက်. compatibility ကိုသတင်းအချက်အလက်ထိပ်ဘယ်ဖက်အပေါ် Menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း, ကမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်" သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုစစ်ဆေးပါ။ "
သို့ရာတွင်ထိုသို့သီအိုရီအ program တစ်ခုစတင်သို့မဟုတ် running နှင့်ပြဿနာများပေါ်ပေါက်နိုင်ကြောင်း: ဥပမာ, နောက်ဆုံးပေါ်အတွင်းကို Preview တည်ဆောက်သုံးပြီးငါ NVIDIA ရိပ်မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်ဘို့ Play ကို run ဖို့ငြင်းဆန်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရေးကြီးသောအဖြစ်အထဲကဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ပိုမိုရှိပါက, ငါသည်မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုဖြေဆိုရန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါရှိသမြှသောမေးခွန်းများကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကို Microsoft အားဖြင့် Windows ရဲ့ 10 ရက်နေ့တွင်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေတွေကို၏တရားဝင်စာမျက်နှာမှာကြည့်အကြံပြု
ဗီဒီယို Watch: Original Xiaomi Air 12 Notebook You Can Buy in Online Store RisoFan (စက်တင်ဘာလ 2019).